नवराज बिकको न्यायको लागी गगन थापाको संसदमा चेतावनी (भिडियो) Canada Nepal
भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई चितवनमा सुरु भयो जग्गाधनी पुर्जा दिने प्रक्रिया
सर्वोच्च अदालत पुगे प्रचण्ड
अमेरिकाले स्वीकृति दिएको एक मात्रा लगाए पुग्ने कोभिड खोपका यस्ता छन् विशेषता
लगातार घट्दै सुनको मूल्य, यस्तो छ आजको भाउ
विश्वभर करिब ९ करोड कोरोना संक्रमित निको भए, कुन देशमा कति संक्रमित र मृत्यु ?
नवराज बिकको न्यायको लागी गगन थापाको संसदमा चेतावनी (भिडियो)
क्यानाडानेपाल जेठ १९ २०७७
काठमाडौ । सांसद गगन थापाले संविधानले स्वतन्त्रता, समानता, आत्मसम्मान, बाँच्न पाउने हक, मर्यादित जीवन जिउन पाउने हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र दलितको हकका कुराहरु लेखिएपनि रुकुम घटनाले लज्जित बनाएको बताएका छन् ।
उनले विभिन्न कारण देखाएर घटना ढोकछोप गर्न खोजिए सैह्य नहुने बताएका हुन् । ‘‘यस्ता अमानविय र क्रुर घटनालाई भवितव्य हो भनेर देखाउन र सहायक कारणहरु देखाएर यो घटनाको जरामा रहेको उच्च जातिय अहंकारको ढाकछोप गर्न गरिरहेको संगठित प्रयत्न र राज्यको लाचारीलाई यो संसदले टुलटुल हेरेर बस्ने हो भने लाज पनि हामीसँग लजाउँछ । अनुहारको दाग ऐना पुछेर जाँदैन तसर्थ । रुकुम घटना लगायत यो लक डाउनको अवधिमा जातिय विभेदके कारण ३२ भन्दा बढी दलितहरुको हत्या आत्महत्या बलात्कारको घटनाको छानबिन गर्न अबिलम्ब सर्वदलिय संसदीय छानबिन समिति बनाउन जोडदार माग गर्दछु । सदनले यो नबनाएसम्म हामी यो मागिरहने छौँ । न्यायको पक्ष्ँमा बोलिरहने छौँ । लडिरहने छौँ ।’’
जेठ १९, २०७७ सोमवार १२:५३:०० बजे : प्रकाशित
सेल्फी हानौँला’ गायकको ‘सार्टनैको चोली’मा सरोज र आश्मा (भिडियो)
काठमाण्डौ। ‘सेल्फी हानौँला’, ‘ट्यूसन पढाउँछु’, ‘क्यालेण्डर’ जस्ता कैयन गीतबाट चर्चित बनेका गायक तथा संगीतकार शंकर थापा ‘स्माईल’को नयाँ रोमान्टिक गीत रिलीज भएको छ । गीतमा अम्बिका गुरुंगको शब्द, शंकरको संगीत तथा स्वर रहेको छ भने महिला स्वर दीपा लामाले दिएकी छन् ।
विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९ लाख ८७ हजार नाघ्यो, हेर्नुहोस् कुन देशमा कति संक्रमित र मृत्यु ? बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट थप एक जनाको ज्यान गयो भारतमा एकैदिन ११ सय बढीको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु
आफ्ना पहिलेका गीतहरु जसरी नै यो गीतलाई पनि दर्शक श्रोताले अत्याधिक मन पराउने गायक तथा संगीतकार थापाको बिश्वास छ । ‘सेल्फी हानौँला पछि धेरै रमाईला गीतहरुमा काम गरियो त्यो मध्ये यो एक हो । यो गीतबाट धेरै अपेक्षा गरेको छु’, थापाले बताए ।
भाद्र १७, २०७७ बुधवार ०१:५२:२३ बजे : प्रकाशित
आलिया र सञ्जयको 'सडक-२' को ट्रेलर बन्यो सर्वाधिक डिसलाइक पाउने भिडियो
काठमाडौं - अभिनेता सञ्जय दत्त र अभिनेत्री आलिया भट्ट अभिनित फिल्म 'सडक-२' को ट्रेलर सर्वाधिक डिसलाइक पाउने भिडियो बनेको छ । बुधबार युट्युबमा सार्वजनिक भएको 'सडक-२' को ट्रेलर ट्रेलरलाई धेरैले रुचाएनन् ।
यस ट्रेलरमा लाइक भन्दा धेरै गुणा डिस्लाइक आएको छ । यस समाचार तयार पार्दासम्म यस भिडियालाई ३ लाख २७ हजारले लाइक गरेका छन् भने ६० लाखले डिस्लाइक गरेका छन् ।
यस्तै धेरै डिस्लाइक पाएको भिडियो हेर्दा सन् २०१८ को डिसेम्बर ६ मा सार्वजनिक भएको ‘यूट्युब रिवाइन्ड २०१८ : एभ्रिवान कन्ट्रोल्स रिवाइन्ड’ रहेको छ । यसले एक करोड ८१ लाख भन्दा बढी डिस्लाइक पाएको छ ।
फिल्म सडक २ सन् १९९१ मा प्रदर्शनमा आएको सडक को सिक्वेल हो । फिल्मलाई महेश भट्टले निर्देशन र मुकेश भट्टले निर्माण गरेका छन् । २८ अगष्टमा डिजिटल प्लेटफर्मबाट रिलिज हुने तयारीमा रहेको यस फिल्ममा आलिया भट्ट, सञ्जय दत्त, आदित्यराय कपुरलगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ ।
श्रावण २९, २०७७ बिहिवार २०:१५:५४ बजे : प्रकाशित
# सडक २
श्रीमान् श्रीमती बीचको नोकझोकले टिकटकमा भाइरल बनेका मनोज आरुशीको जोडी (भिडियो)
काठमाडौ । टिकटकमा भिडियो बनाएर अहिले धेरै युवापुस्ताहरु सामाजिक संजालमा चर्चा बटुलिरहेका छन् । टिकटकमा बढ्दो क्रेजले गर्दा टिकटकका कयौं प्रतिभाहरु अहिले भिडियोदेखि सिरियलसम्म पुगेका छन् ।
टिकटकमा अहिले एउटा जोडी भाइरल छन् । मनोज केसी र आरुशी भण्डारी केसीको जोडीले बनाएका भिडियोहरुले सामाजिक संजालमा राम्रो चर्चा बटुलेको छ । मनोज र आरुशी श्रीमान् श्रीमती हुन् र यो जोडीले आफ्नो भिडियोमा समेत श्रीमान् श्रीमती बीच हुने नोकझोक र झगडालाई रोचक तरिकाले प्रस्तुत गरेको हुँदा यो जोडीको भिडियोहरु रुचाईएको छ । घर भित्र बसेर श्रीमान् श्रीमती बीच हुने सानो सानो कुरालाई लिएर बनाइएको भिडियोहरु टिकटकमा राखेर यो जोडीले राम्रो फलोवर्स बनाएका छन् ।
मनोज केसी र आरुशी भण्डारीको प्रेम पश्चात विवाह भएको हो । मनोज केसीले आरुशीलाई सुरुमा ओबामा बनेर पट्याउन खोजेका थिए भने आरुशीले आफू पनि नेपालको रानी हुँ देश निकाला गरौला भन्दै ब्लक गरेकी थिईन । यसरी नोकझोक सहित सुरु मनोज र आरुशीको चिनजान बिस्तारी माया प्रेममा बद्लिएको थियो । मनोजले आरुशीको मन जित्न धेरै नै कठिन भएको र धेरै प्रयास पश्चात आरुशीले प्रेम स्वीकार गरेको क्यानाडा नेपालसंगको कुराकानीमा उल्लेख गरेका छन् ।
आषाढ ३०, २०७७ मंगलवार १३:५८:०० बजे : प्रकाशित
आफ्नै देशमा फर्किन आव्हान गर्दै \_'बाटो भुलेर\_' गीत सार्वजनिक
काठमाडौ । संसारभर रहेका तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदिबहिनीहरुलाई आफ्नै देशमा फर्किन आव्हान गरेको गीत " बाटो भुलेर" आज सार्वजनिक भएको छ ।
जेठ ३२, २०७७ आइतवार १८:१०:०० बजे : प्रकाशित
भारतलाई माया गर्ने, सेनालाई काम गर्न नदिने अब के गर्न खोजेको भन्दै भिम रावल गर्जिए संसदमा (भिडियो)
काठमाडौ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीम रावलले राष्ट्रिय सुरक्षा र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रीत भएर बजेट आउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नेता रावलले कोरोनाको सामना गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा र कृषि क्षेत्रमा सिद्धान्त र चुनौतीहरु केन्द्रीत गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । देश र जनता सुरक्षीत नभइ कुनै पनि काम अगाडी बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै राववले नेपालको भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको विषयमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सुनुवाई नभएको बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सिद्धान्तका छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै रावलले कालापानी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी खटाउने विषयमा उचित प्रवन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । त्यहाँ सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिनुपर्ने भएपनि अहिलेम्म कुनै काम सुरु नभएको उनले बताएका छन् । पञ्चायत कालमा समेत दार्चुलाको सीतापुलमा भारतीय र तिंकरमा चीनसँगको भन्सार विन्दु सञ्चालन रहेपनि अहिले सबै भन्द रहेको तर्फ उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कोरोना संक्रमण रोक्ने सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुको व्यवस्थापन नै हुन नसकेको भन्दै रावलले भौतिक संरचना निर्माण लगायत व्यक्तिगत आवश्यक उपकरणहरुको प्रवन्ध गर्ने नीति अघि सार्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले भने, ‘‘कालापानी क्षेत्रमा नेपाली सेनालाई सडक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने थियो भन्ने कुरा बुझेका हौँ । तर अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन् । सीतापुलमा भारत र तिंकरमा चीनसँगको भन्सार पञ्चायतकालमा समेत सञ्चालनमा थियो । नीति र सिद्धान्त राष्ट्रिय सुरक्षामा केन्द्रीत हुन्छ भने यी कुराहरुलाई केले रोकेको छ ।’’
ग्रामिण क्षेत्रमा उत्पादन हुने तरकारी सडेर जाने अवस्थामा भारतबाट ट्रकका ट्रक सडक नेपाल भित्रिरहेको उल्लेख गर्दै रावलले बजेटमा यी कुराहरु समेट्न गम्भिरता देखाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तको अवधारणा अघि सारेपनि व्यवहारमा दलाल, नोकरशाही र पूँजीपतिहरुलाई प्रसय दिइएको उनले बताएका छन् ।
बैशाख ३०, २०७७ मंगलवार १३:२८:०० बजे : प्रकाशित
भिम रावल र प्रदिप ज्ञवालीको चर्काचर्की, देश माथी नाङ्गो आक्रमण हुँदा मन्त्री बोल्न नभ्याउने !
काठमाडौ । भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएको विषयमा छलफल गर्न बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले स्पष्ट निर्णय नगरेपछि बैठकमा विवाद भएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहित छलफलका लागि बोलाइएको बैठकमा समितिले कुनै निर्णय नगरेपछि विवाद भएको हो । सांसदहरुले निर्णय नगरी बैठक स्थगित गरिएको र आगामी बैठकका विषयमा समेत स्पष्ट जानकारी नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बैठकमा उठेका विषयमा जवाफ दिएपनि कुनै निर्णय÷निर्देशन नगरी आगामी बैठक अनिश्चित भएपछि सांसदहरुले बैठकको मिति तोक्नपभर्ने भन्दै अडान लिएका थिए । सांसद भीम रावलले देशको स्वाधिनतामाथि हस्तक्षेप भएपनि समितिले बैठकको मिति तय गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताए । बैठक सकिएपछि समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले ‘‘भरसक भोली नै बैठक बस्ने सोच हो र भोली मन्त्रीज्यूको समय मिल्यो र सदन नरहने अवस्थामा ११ बजे नै बैठक बस्छौँ । तर अहिले नै यसलाई म ढुंगो दिन सक्दिन’’ भनेपछि विवाद सुरु भएको थियो । लगत्तै रावलले ‘संसदको कुरा गर्नुभयो संसद के का लागि’ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ? ‘‘देशको सार्वभौम सत्तामाथि नाङप्गो हस्तक्षेप भएको छ । अनि समय के का लागि हो । सरकार के का लागि हो । देश केका लागि ? यो भन्न मिल्दैन् । या अहिले समितिमा बोल्न पाउनुपर्छ या बैठकको समय निर्धारण हुनुपर्छ । माननिय सभापति ज्यू देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षाभन्दा ठूलो कुरा के हो ? मलाई सुनाउनुहोस् । बैठकको समय तय हुनुपर्छ र त्यो बैठकमा कुरा राख्न पाउनुपर्छ । त्यो बैठकबाट निर्णय हुनुपर्छ । यसरी बैठकका विषयमा अहिले भन्न सक्दिन भन्न मिल्दैन् ।’’
लगत्तै सभापति निरौलाले ‘माननिय ज्यू गम्भिर विषयको छलफल हुनुपर्छ । आजै सक्न पाए हुन्थ्यो ।’ भनेपछि बाँझाबाँझ थपिएको थियो ।
चर्काचर्किपछि मन्त्री ज्ञवालीले संसदका सबै समिति बराबर भएकाले सबैलाई समय दिनुपर्ने बाध्यताका कारण अहिले नै भन्न नसकिने बताएका छन् । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिक लगायतका विषयमा अन्य समितिहरुले पनि समय लिएका कारण समय तालमेल गरेर सभापतिलाई जानकारी गराउने बताएका छन् । आइतबारको समिति बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले भारतले सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । केही प्रावविधिक कुरुहरु मिलाउन बाँकी रहेकाले नक्सा अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको उनले बताए । मन्त्री ज्ञवालीले नक्सा सार्वजनिक नभएकै कारण लिपुलेक क्षेत्रको १८, १९ किलोमिटर भूमि मिचिएको हो भनेर नसोच्न पनि आग्रह गरे । नक्सा जारी नभएको कारण सीमा नमिचिएको उनको दावी छ । उनले भने , ‘मैले जुन अघि १८, १९ किलोमिटरको कुरा गरे त्यो त २०३२ सालमा जारी भएको नेपालको नक्सामै लिपुलेक लगायतका क्षेत्र छन् । नक्सा नभएको कारणले बाटो गएको नभएको कारणले नगएको भन्ने होइन् ।’
यो पनि पढ्नुहोस: भिम रावल संगै संसदमा गर्जिए गगन थापा, भारत विरुद्द लड्न सरकारलाई चेतावनी (भिडियो)
अन्तिममा समिति सभापति निरौलाले परराष्ट्रमन्त्रीले अन्य बैठकमा पनि समय दिएका कारण समय तत्काल तोक्न नसकिएको भन्दै जुनसुकै अवस्थामा पनि भोली विहान साढे ८ बजे बैठक बस्ने बताए ।
कुटनीतिक र वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुको विकल्प अहिले नभएको पनि उनले बताएका छन् ।
बैशाख २८, २०७७ आइतवार १६:५६:०० बजे : प्रकाशित